नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ हजार २१२ पुग्यो – RemitKhabar
by Remit Khabar - 29/05/2020 0
काठमाडौं- नेपालमा थप १७० जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या १ हजार २१२ पुगेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नियमित लाइभ अपडेटमा नेपालमा हालसम्म १ हजार २१२ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले हालसम्म कोभिड-१९ पुष्टि भएका व्यक्तिको संख्या १ हजार २१२पुगेको जानकारी दिएका हुन् ।
डा देवकोटाका अनुसार कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा २७ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । उनीहरु झापा कचनाकवलका २४ जना १८ देखि ४१ वर्षका पुरुष रहेका छन् । यस्तै झापाकै तयारी भिट्टाका ३ जना रहेका छन् । उनीहरु २४ देखि ५४ वर्ष उमेर समूहका रहेका छन् ।
यस्तै धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा सप्तरी राजविराजका ४ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । उनीहरु २० देखि २६ वर्ष उमेर समूहका रहेका छन् । यस्तै झापाकै भद्रपुरका एक जना ३४ वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको उनले जानकारी दिए ।
यसैगरी नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालमा ९ जनामा पोजेटिभ देखिएको छ । उनीहरु मध्ये बाराको पचौटाको राष्ट्रिय माविको क्वारेन्टाइनमा रहेका ४ जना रहेका छन् । उनीहरु २७ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका पुरुष छन् । यस्तै पर्साको पोखरीयाका ४ जना रहेका छन् । उनीहरु २१ देखि ४२ वर्ष उमेर समूहका पुरुष रहेका छन् । यस्तै पर्साका जिराभवानीका एक जना ३४ वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
त्यस्तै ललितपुरको पाटन अस्पतालको प्रयोगशालमा गरिएको परीक्षणमा एक जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनी सर्लाही घर भएका पाटन अस्पतालमै रहेका ३१ वर्षीया महिला रहेकी छन् ।
यस्तै गण्डकी अस्पतालको प्रयोगशालमा गरिएको परीक्षणमा १ जनामा पोजेटिभ देखिएको छ । उनी म्याग्दीको मालिकाका ३० वर्षीय पुरुष हुन् । डा. देवकोटाका अनुसार भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप १० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनीहरु मध्ये बाँके डुडुवाका १० जना रहेका छन् । उनीहरु १० देखि ४१ वर्ष उमेर समूहका पुरुष रहेका छन् ।
प्रवक्ता डा देवकोटाका अनुसार भरतपुर अस्पतालको प्रयोगशालमा गरिएको परीक्षणमा पनि ६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनीहरु कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिकाको ४ जना ३२ देखि २६ वर्ष सम्मका पुरुष, यस्तै नवलपरासीका २ जना १९ र २१ वर्षका पुरुष रहेका छन् ।
यसैगरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौंमा गरिएको परीक्षणमा ८४ जनाको कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । उनीहरुमध्ये कपिलवस्तु यशोधराको भृकुटी मावि कृष्णनगरको क्वारेन्टाइनमा रहेका २३ जना छन् ।उनीहरु ७ वर्षका बालक देखि ५२ वर्षका वृद्धसम्म रहेका छन् ।
यस्तै रौतहटको राजपुरमा भरदवाको रहेको जनता मावि डुमरीयामा ५६ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । प्रवक्ता डा देवकोटाका अनुसार उनीहरु २ जना बालिका र ५४ जना पुरुष रहेका छन् । यस्तै सर्लाहीका ४ जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको डा. देवकोटाले जानकारी दिए । उनीहरु १९ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका ३ जना पुरुष र एक जना महिला छन् ।
यस्तै रुपन्देहीको प्रादेशिक प्रयोगशालामा १६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको उनले जानकारी दिए । उनीहरु कपिलवस्तु गौतमबुद्ध माविको क्वारेन्टाइका १५ जना पुरुष र रुपन्देहीका सैनामैनाका एकजना २७ पुरुष रहेका छन् ।
त्यसैगरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा गरिएको परीक्षणमा ११ जनाको कोरोना पोजेटिभ आएको छ । उनीहरु मध्ये दाङको गढवाका २ जना २८ र ४१ वर्षका पुरुष र कपिलवस्तुको विजयनगरका ९ जना १७ देखि ५२ वर्षका पुरुष रहेका छन् । यो सँगै नेपालमा कूल कोरोना संक्रमितको संख्या १ हजार २१२ जना पुगेको छ ।
जसमध्ये १ हजार १ सय ३ जना पुरुष र १ सय ९ जना महिला रहेका छन् । ती मध्ये २ सय ६ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । कोरोना निको हुनेमा १ सय ६२ र महिला ४४ जना रहेका छन् । यस्तै हालसम्म ६ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । हालसम्म नेपालका ५२ जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काेराेना सङ्क्रमणकाे ‘अर्काे झट्का’काे लागि तयार रहाैँ : विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन